တစ်နေ့မှာ (၈) နာရီထက် ပိုအိပ်ရင် အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးဖွယ်ရှိတယ်တဲ့
7 Aug 2018 . 5:21 PM
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပျမ်းမျှအိပ်ချိန်ကိုတော့ ၇နာရီနဲ့ ၈နာရီကြားမှာပဲရှိသင့်တယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်ချိန်ဆိုတာ တန်ဆေးလွန်ဘေးပါပဲ။ အိပ်ချိန်နည်းသွားမယ်ဆိုရင် (ဥပမာ – တစ်နေ့ကို ၆နာရီပဲ အိပ်တယ်) ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာမယ်၊ ဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်လာမယ်၊ အဝလွန်လာနိုင်သလို နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်များသွားရင် ဒါမှမဟုတ် တစ်နေ့ကို (၁ဝ)နာရီလောက် အိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲ။
လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်နေ့မှာ (၈)နာရီထက် ပိုအိပ်မယ်ဆိုရင် အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးဖွယ်ရှိတယ်လို့ University of Keele ၊ University of Manchester ၊ University of Leeds နဲ့ University of East Anglia က သုတေသနပညာရှင်တွေက အဖြေထုတ်ခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာတစ်လွှားက လူ (၃.၃) သန်းကို စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး အိပ်ချိန်များတဲ့သူတွေဟာ နှလုံးရောဂါနဲ့ လေဖြတ်နိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ချိန်များတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု နည်းလာပြီး နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ချိန်များလွန်းတာဟာ စိတ်ကျဝေဒနာရဲ့ ဝိသေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ “အိပ်ချိန်များလာရင် နှလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေ ပိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ နာတာရှည်ရောဂါ၊ မောပန်းလွယ်တာနဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်” လို့ အဆိုပါသုတေသနကို ဦးဆောင်သူ ဒေါက်တာ Chun Shing Kwok က ဆိုထားပါတယ်။
တစ်နေ့ကို (၉) နာရီအထိ အိပ်တဲ့သူတွေက အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးနိုင်ဖို့ (၁၄) ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး (၁ဝ) နာရီအထိ အိပ်မယ်ဆိုရင် (၃ဝ) ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် (၁၁) နာရီအထိ အိပ်စက်မယ်ဆိုရင် အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးနိုင်ဖို့ (၄၇) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်နေ့မှာ (၁ဝ) နာရီအထိ အိပ်မယ်ဆိုရင် လေဖြတ်ပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် သေဆုံးဖို့ (၅၆) ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးဖို့ (၄၉) ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကဲ . . . လူသားအားလုံး အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ဖို့ အအိပ်ကြီးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို လက်တို့ပြောလိုက်ပါဦး။
တဈနမှေ့ာ (၈) နာရီထကျ ပိုအိပျရငျ အရှယျမတိုငျခငျ သဆေုံးဖှယျရှိတယျတဲ့
လူတဈယောကျရဲ့ ပမျြးမြှအိပျခြိနျကိုတော့ ၇နာရီနဲ့ ၈နာရီကွားမှာပဲရှိသငျ့တယျလို့ ဆေးပညာရှငျတှကေ လကျခံထားကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိပျခြိနျဆိုတာ တနျဆေးလှနျဘေးပါပဲ။ အိပျခြိနျနညျးသှားမယျဆိုရငျ (ဥပမာ – တဈနကေို့ ၆နာရီပဲ အိပျတယျ) ကိုယျအလေးခြိနျ တကျလာမယျ၊ ဆီးခြိုသှေးခြိုဖွဈလာမယျ၊ အဝလှနျလာနိုငျသလို နှလုံးနဲ့ပတျသကျတဲ့ရောဂါတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ အိပျခြိနျမြားသှားရငျ ဒါမှမဟုတျ တဈနကေို့ (၁ဝ)နာရီလောကျ အိပျလိုကျမယျဆိုရငျ ဘာဖွဈသှားနိုငျလဲ။
လူတဈယောကျဟာ တဈနမှေ့ာ (၈)နာရီထကျ ပိုအိပျမယျဆိုရငျ အရှယျမတိုငျခငျ သဆေုံးဖှယျရှိတယျလို့ University of Keele ၊ University of Manchester ၊ University of Leeds နဲ့ University of East Anglia က သုတသေနပညာရှငျတှကေ အဖွထေုတျခဲ့တာပါ။ ကမ်ဘာတဈလှားက လူ (၃.၃) သနျးကို စဈတမျးကောကျယူပွီး အိပျခြိနျမြားတဲ့သူတှဟော နှလုံးရောဂါနဲ့ လဖွေတျနိုငျတယျလို့ သုံးသပျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အိပျခြိနျမြားတဲ့သူတှဟော ကိုယျလကျလှုပျရှားမှု နညျးလာပွီး နှလုံးနဲ့ပတျသကျတဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွဈပှားလာနိုငျတယျလို့ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ အိပျခြိနျမြားလှနျးတာဟာ စိတျကဝြဒေနာရဲ့ ဝိသသေတဈခုဖွဈပွီး နောကျဆကျတှဲရောဂါတှေ ဖွဈပှားလာနိုငျပါတယျ။ “အိပျခြိနျမြားလာရငျ နှလုံးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ရောဂါတှေ ပိုဖွဈလာနိုငျတယျ။ ပွီးတော့ နာတာရှညျရောဂါ၊ မောပနျးလှယျတာနဲ့ သှေးအားနညျးရောဂါတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ” လို့ အဆိုပါသုတသေနကို ဦးဆောငျသူ ဒေါကျတာ Chun Shing Kwok က ဆိုထားပါတယျ။
တဈနကေို့ (၉) နာရီအထိ အိပျတဲ့သူတှကေ အရှယျမတိုငျခငျ သဆေုံးနိုငျဖို့ (၁၄) ရာခိုငျနှုနျးအထိရှိပွီး (၁ဝ) နာရီအထိ အိပျမယျဆိုရငျ (၃ဝ) ရာခိုငျနှုနျးအထိ မွငျ့တကျသှားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ (၁၁) နာရီအထိ အိပျစကျမယျဆိုရငျ အရှယျမတိုငျခငျ သဆေုံးနိုငျဖို့ (၄၇) ရာခိုငျနှုနျးဖွဈတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ တဈနမှေ့ာ (၁ဝ) နာရီအထိ အိပျမယျဆိုရငျ လဖွေတျပွီး အရှယျမတိုငျခငျ သဆေုံးဖို့ (၅၆) ရာခိုငျနှုနျးအထိရှိပွီး နှလုံးရောဂါနဲ့ သဆေုံးဖို့ (၄၉) ရာခိုငျနှုနျးအထိရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ကဲ . . . လူသားအားလုံး အသကျရှညျရှညျနနေိုငျဖို့ အအိပျကွီးတဲ့ သူငယျခငျြးကို လကျတို့ပွောလိုကျပါဦး။